Ukucaciswa kweNubia X kuvuwe nguGeekbench | I-Androidsis
Kuninzi okuqikelelweyo malunga neflegi elandelayo yeNubian, inkxaso-mali yeZTE, ekucingelwa ukuba yabizwa ngokuba yi-Z18S, kodwa ngoku eza kuthi yamkele igama elitsha, elilula, nangona ingeloqobo lokuqala: UNubia X.
Zimbalwa iiyure ezidlulileyo, le ndawo ibhaliswe eGeekbench, yenye yeebenchmark ezidumileyo. Ndiyabulela koku, sele sisazi ukubalula okuphezulu, nangona babesele benamahemuhemu ngaphambili.
Uluhlu lweNubia NX616J lutyhila oko Ifakelwe kwangaphambili ngenkqubo yokusebenza ye-Android 8.1 Oreo. Ukongeza, ibonisa ubukho be-chipset ye-Snapdragon 845, i-SoC eya kuthi isebenzise i-smartphone kunye ne-6 GB ye-RAM.
Lonke uluhlu lwe-Nubia NX616J olubonakaliswe kwiqonga lokulinganisa ukuza kuthi ga ngoku luneenkcukacha ezifanayo. Kwisikrini esingezantsi, ifowuni yafumana amanqaku angama-2.108 kunye nama-7.275 kumanqaku asisiseko kunye novavanyo oluninzi, ngokulandelanayo.
UNubia kutshanje uqinisekisile ukuba uzakuqhuba ngokusungulwa komsitho ngo-Okthobha 31 ukubhengeza i-smartphone elandelayo. Amanye amarhe athi ayakubizwa ngokuba yi-Nubia Z18s, kodwa iposta yomsitho wokuphehlelela yacebisa ukuba ibe yi-Nubia X.
Uluhlu lweTENAA I-Nubia NX616J ityhile ukuba izakufika ngescreen se-LCD esisi-6.26-intshi esixhasa isisombululo se-FullHD + se-2.280 x 1.080 pixels. Kwelinye icala, ixhotyiswe ngescreen sesibini ngasemva esiyi-intshi ze-5.1 kwaye ivelisa isisombululo se-HD + se-1.520 x 720 pixels.
Akukho khamera ye-selfie kwi-Nubia NX616J. Endaweni yoko, isibonakaliso sayo sesibini siphindwe kabini njengembonakalo yekhamera yokuseta kwe-24-megapixel kunye ne-16-megapixel ye-lens ezimbini. Ukugcinwa kwefowuni eyi-128GB kulindeleke ukuba ifike nge-8GB ye-RAM, ngelixa imodeli yayo yokugcina engama-64GB inokuba ne-6GB ye-RAM. Ukongeza koku, okulindelweyo kukuba iya kufumana amandla ukusuka kubhetri yomthamo we-3.800 mAh, exhasa ukutshaja ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukuhluzwa kweenkcukacha ezahlukeneyo zeNubia X, iflegi elandelayo yenkampani yaseTshayina